Al-Shabaab oo qabsatay degaanno si dhib leh looga saarey | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo qabsatay degaanno si dhib leh looga saarey
Howlgalka Ciidanka dowladda ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa noqday mid mira-dhali waayay kadib markii Al-Shabaab dib ugu laabatay degaanadii laga qabsaday dhowr maalmood kahor.
JOWHAR, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab ayaa dib ula wareegtay saddex degaanno oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose, ee Koonfurta Soomaaliya iyadoo aan wax iska-caabin ah kala kulmin Ciidanka DF.
Waxay Al-Shabaab sheegtay Maanta in gacanteeda dib ugu soo laabteen Tuulooyinka Warciise, War-lahelay iyo Qoordheere, oo dhamaantooda kamid ah meelihii dagaallada xooggan ay ka dhacayeen tan iyo todobaadkii lasoo dhaafay.
Lama oga sababta Ciidanka dowladda uga soo baxeen degaannadan sida dhibka badan lagula wareegay, iyadoo aan jirin wax war ah oo kasoo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga oo ku aadan arintaan.
Taliyihii guutada 6aad ee Gorgor Gaashaanle Maxamed C/waaxid ayaa dowladda looga dilay dagaalkii degaanaddan lagu xoreeyay, iyadoo ay muuqato inuu fashilmay howlgalka Ciidanka dowladda oo uu hogaaminayo Jen Odowaa Yuusuf Raage.
Tuulooyinka dhaca duleedka Jowhar waa meel ay Kooxda Al-Shabaab ku xoog badan tahay, waxaana aad u adag in laga saaro maadaama dhulka uu yahay keydmo, beero ka baxaan oo wabigana ku dhaw, iyadoo mararka dagaalladu socdaan ay Al-Shabaab biyo kusoo furto si aysan ugu soo gudbin Gaadiidka dagaalka dowladda.